FARAFANGANA : Ampanjaka voalaza ho namaky trano maty niharan’ny fitsaram-bahoaka
Hatramin’ny olobe ao an-tanàna ihany koa no efa iharan’ny hatezeram-bahoaka amin’izao fotoana izao. 8 mai 2017
Tsy mifidy izay hanaovana fitsaram-bahoaka intsony ny olona fa na mpitandro filaminana na ireo heverina ho olona manana ny hasiny ao an-tanàna dia lasibatra vao mamofompofona ho nanao ratsy fotsiny.
Tany Evato ao anatin’ny Distrikan’i Farafangana iny dia ny Ampanjaka tao an-tanana no norotahin’ny olona. Vono sy daroka tsy nifankahitana no nihatra tamin’ity farany ka nitarika ny fahafatesany. Afak’omaly antoandro no nisehoan’ity korontana ity tany an-toerana. Araka ny loharanom-baovao voaray dia voarohirohy tamina vaky trano niseho tao an-tanàna izy io, ka izay no nampirehitra ny hatezeran’ny olona taminy.
Herinandro vitsy teo izay no nisy nanafika ny Ben’ny tanànan’i Vohilengo mbola ao anatin’ity Distrika ity hatrany. Entana maro isan-karazany no very tamin’io niaraka tamin’ny vola.
Rehefa nanao ny fikarohana ireo olon-dratsy sy ny nahavanon-doza
ny mpitandro filaminana dia isan’ny iray tamin’ireo voasambotra ny zanakalahin’ity Ampanjaka ity. Nisy tamin’ireo fokonolona teo amin’ny manodidina anefa no nanambara mazava fa nahita ihany koa ny rainy nandray anjara nandritra ilay fandrobana kanefa tsy nosamborin’ny Zandary ity farany.
Io no nampirehitra ny hatezeran’ny olona, ka nalainy an-keriny tany amin’izay toerana nisy azy ilay Ampanjaka ary io maty novonoina niharan’ny fitsaram-bahoaka io no niafarany. Araka ny loharanom-baovao voaray hatrany dia Ampanjaka vao nandray toerana nisolo ny teo alohany ity namoy ny ainy ity no sady voalaza ho rahalahina mpanao politika goavana avy any amin’iny faritra iny. Voalaza fa tsy manaiky mora foana manoloana ity trangan-javatra niseho ity ireo fianakaviany.
Ny fokonolona kosa anefa ankilan’izay milaza fa tsy handefitra amin’ny fisian’ireo mpanao ratsy fa hanao ny fisamborana hatrany hatrany na iza na iza. Andrasana izay mety ho tohin’ny raharaha.
2017-05-09 07:10:31 par Raharijaona Vanloo
Na inona na inona trangan-javatra eny anivon’ny fiaraha-monina dia tsy tokony ho ekena ny fitsaram-bahoaka. Ny fitsaram-bahoaka dia midika fa tany tsy tan-dalàna iMadagascar. Eo anivon’ny fiaraha-monina dia midika ihany koa fa azo atao tsara izany ny mamono olona. Ny taranaka ao aoriana izany dia ihevi-tena fa afaka manao fitsarana araka izay eritreretiny fa tandrify izany. Mampiana-dratsy ny taranaka ao aoriana io fitsaram-bahoaka io ary tsy tsy to-teny na dia ny olo-be ao an-tanàna izay azo eritreretina fa mpitaiza sy mpananatra.